Miteraka hetsi-panoherana ny fanesorana ny fitakiana ny fahaizana fiteny sy ny literatiora filipino any amin’ny oniversite · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2018 14:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Ελληνικά, 繁體中文, Italiano, Français, English
Fihetsiketseha-panoheran'ny mpianatra ao Manila amin'ny hanesorana ny Filipino ho taranja tsy maintsy atao. Sary avy amin'i Manila Collegian, nahazoana alalana.
Mitarika fanentanana manohitra ny dingana ataon'ny governemanta hanaisotra ny tsy maintsy ampianarana ny fiteny sy ny Panitikan (literatiora) Filipino ny vondrona profesora, mpampianatra ambony ary mpianatra Filipino ao Filipina.
Miaraka amin'ny teny anglisy, iray amin'ny teny ofisialy roa ao Filipina ny Filipino, raha mihoatra ny 185 ny fiteny ao. Io no fitenim-pirenena voalohany sady ifandraisan'ny samy olona ao.
Tamin'ny 9 oktobra 2018, nankatoavin'ny Fitsarana Tampony ny maha-aradalàna ny tenimita faha-13 tamin'ny 2013 navoakan'ny Vaomieran'ny Fampianarana Ambony (CHED) izay manaisotra amin'ny fomba ofisialy ny teny Filipino sy ny literatioran'i Filipina ao amin'ny fampianarana ankapobeny ao amin'ny kolejy sy ny oniversite. Navadiky ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony ny didy vonjimaika tamin'ny taona 2015 azon'ny mpanohitra ny fepetra noraisin'ny CHED.
Ny fanabeazana fototra ao Filipina dia voarafitry ny garabola na kindergarten (ho an'ny 5-6 taona), tsotra (ho an'ny 7-12 taona), sekoly ambony (ho an'ny 13-16 taona), ary ny sekoly ambony zokiny (ho an'ny 17-18 taona). Arahin'ny ambaratongan'ny kolejy (ho an'ny 19-22 taona) any amin'ny rafi-pampianarana ambony izany.
Amarinin'ny CHED ny fanovana taranjam-pampianarana amin'ny fandresen-dahatra fa ireo taranjam-pampianarana ambony ireo dia efa ampianarina any amin'ny fanabeazana fototra. Tonga moa izany amin'ny alalan'ny fametrahana ny programa K-12, izay nanampy taom-pampianarana roa fanampiny any amin'ny sekoly ambony zokiny tamin'ny taona 2011.
Saingy lazain'ny mpitsikera fa fanovana hanamafisana ny rafi-pampianarana “fanjanahantany amin'ny endriny vaovao” nolovaina tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany amerikana (Etazonia) ity fandaharam-pianarana anti-Filipino ka manome vahana ny teny anglisy ity ary mitarika ny mpianatra ho taniketsan'ny “politikam-panondranana mpiasa any ivelany” ataon'ny governemanta fa tsy ho olom-pirenena mandray anjara amin'ny fananganana ny firenena. Ny famafana ny Filipino dia jerena ho anisan'ny fonosana ara-panabeazana “neoliberaly” izay mametraka an-jorombala ny sehatra maha-olombelona sy akademika heverina ho tsy ilaina amin'ny fifehezana sy famolavolana ny tanora Filipiana ho filàna mora ho an'ny fandraharahana goavana.
Vondrona isankarazany no mitarika hetsi-panoherana sy fitoriana eny amin'ny fitsarana amin'ny famafàna ny Filipino sy ny Panitikan any amin'ny kolejy. Tanggol Wika (Arovy ny fitenintsika), firaisankinan'ny profesora, mpianatra, mpanoratra ary mpiasa ara-kolontsaina no nametraka fitoriana mba hiheverana azy indray tao amin'ny fitsarana ambony tamin'ny 26 novambra 2018. Nampitandrina ry zareo fa mpampianatra miisa 10000 no mety ho very asa noho ity fanovana fandaharam-pianarana ity.
Mandrisika ny mpiserasera ireo Filipiana mpanandrateny hamoaka anambaràna fanohanana ny fiarovana ny teny filipino any amin'ny kolejy amin'ny fampiasana ny fiantonanteny #TanggolWikaAtBayan (Arovy ny fiteny sy ny tanindrazantsika).
Mpikambana ao amin'ny Tanggol Wika manao diabe mankany amin'ny fitsarana tampony mametraka taratasy fitoriana hiheverana indray ny fanesorana ny filipino any amin'ny fandaharam-pianaran'ny kolejy (mitovy amin'ny oniversite kosa aty amintsika). Sarin'i Manila Collegian nahazoana alalana.
Fanambaràna iray avy amin'ny Vaomieran'ny Oniversiten'i Philippines Diliman no miantso ho amin'ny fitandroana sy fampivelarana ny Filipino sy ny Panitikan any amin'ny kolejy:
Mino izahay fa ny fiteny sy ny literatiora Filipino no kitro ifaharana amin'ny fandalinana fampisainana, fahaiza-mamorona ary fanafahana ny fahafaha-manaon'ny mpianatra sy ny vahoaka, na inona na inona lesona, taranja ary sehatra hay manokana. Tsy fanamaroana fa fampiakarana ny teoria, fampiharana ary ny fampiasana azy any amin'ny oniversite, eto amin'ny firenena ary amin'ny fiainana ny fianarnaa ny fiteny sy ny literatiora any amin'ny kolejy.
Nisy ihany koa ny fanangonan-tsonia an-tserasera natomboky ny departemantan'ny teny filipino sy ny literatioran'i Filipina ao amin'ny oniversitem-pirenena. Indreto ny sasantsasany amin'ny fanehoan-kevitra nosoratan'ireo mpanao sonia an-tserasera tao amin'ny change.org:
Carol Marcelo: Tsy hisy hitia ny teniny raha tsy isika Filipiana ary marina fa mampanankarena azy isika amin'ny alalan'ny fahazotoana mampiasa azy mavitrika sy ny fankatoavana ny mahaizy azy fanahintsika avy aty aloha aza.
Rommel Rodriguez: zava-dehibe ny fanohizana ny fampianarana ny fiteny Filipino sy ny literatioran'i Filipina hatrany amin'ny kolejy satria ao anatin'ny famolavolana ny fahatsiarovana nasionalista sy ny finiavana filipiana ao amin'ny mpianatra izany.
Niely ihany koa ny sary-sy-soratra manala azy amin'ny CHED sy amin'ny governemantan'i Duterte ary fiantsoana ho amin'ny fitandroana ny teny Filipino sy ny Panitikan any amin'ny kolejy:
Tsy sakana ho azy ireo ny fitenin'ny firenena hafa hahatonga azy ho liam-pandrosoana, ka izay no tsy tokony ieritreretan'ny Filipinana fa sakana ho amin'ny fampandrosoana ny fiteny Filipino.
Ilokano aho ary tiako ny manoratra sy mamaky ny kabarin'ny firaisam-pirenena sy ny fanafahana. Satria hain'ny ankamaroan'ny olona izany, ny Filipino no fiteny mahomby indrindra hanatrarana izany.
Ankavia: Fanohanan'ny fiteny sy ny kolontsaina vahiny. Afovoany: Herim-panjakana. Havanana: Fampivoarana ny fiteny sy ny maripanondroam-pirenena.
Ambony: Taranja Filipino. Ambany: “Tsy manana ny fanahy nasionalista ao aminy intsony ny mpianatra amin'izao fotoana”
Tsara ho fantatra: ny mpanoratra dia miasa ho mpanabe ao amin'ny Oniversiten'i Filipina Diliman, Departemantan'ny fiteny Filipino sy ny literatiora Filipiana izay mavitrika amin'ny fanentanana #TanggolWikaAtBayan.